IBridgertons-Ixesha leSibini liqinisekisiwe | IBezzia
IBridgertons: Ixesha lesibini ngoku liqinisekisiwe!
USusana godoy | 27/04/2021 14:00 | Iindaba
IBridgertons ibe yenye yeempumelelo ezinkulu zokuvala unyaka we-2020. Ixesha lokuqala eliboniswe kuqala ngeKrisimesi yalo nyaka ukhankanywe ngasentla, nangoku kwiinyanga kamva abantu basathetha ngesakhiwo kunye nabalinganiswa baso abaphambili. Ke ngoko, emva kwempumelelo enkulu yeli bali, kwakunokwenzeka kuphela ukuba ulinde isavenge sesibini.
Ewe, bekulindelekile njengoko sigqabaze kakuhle, kodwa yintoni mhlawumbi esingayithandiyo uninzi uninzi lolo I-Duke yaseHastings ayizukuba kwisizini yesibini ekudala ilindelwe. Ewe, yenye yekalika kwaye yenye yesanti, ngoko okwangoku asazi ukuba konke oku kuya kuyichaphazela njani impumelelo yenxalenye yesibini, esele iqale ukudubula.
1 Liya kuba njani ixesha lesibini kuthotho lweNetflix
2 Uphuma nini uBridgerton ixesha lesibini
3 Ubuso obutsha eBridgerton?
4 Ndlelantle kwiDuke
Liya kuba njani ixesha lesibini kuthotho lweNetflix
Ngaphandle kokungena kubaphangi, siyacaca ukuba enye yeebhulashi ezisisiseko ezasenza sathandana nexesha lokuqala yayilibali lothando. I-Duke kunye noDaphne bathandana ngokupheleleyo kwaye babhukuqa imiqobo ethile ukuze babe kunye.. Bajongana neengxaki ezininzi, phakathi kwazo yayikukuba nabantwana. Kodwa asizukuqhubela phambili nantoni na, kuba bonke abo bengekayiboni.
Okwangoku, abo bethu abakwenzileyo, kuye kwafuneka ukuba sizuze ngokwazi ukuba eli bali limnandi liza kuqhubeka njani, kodwa kubonakala ngathi ayizubanjalo. Ixesha elitsha alizukuqhubeka nokuqala, kodwa ngoku liza kugxila kwelinye lamalungu eBridgerton kwaye iya kuba ngumzalwana omdala. Kuba njengoko uyazi ngokuqinisekileyo, zihambelana neencwadi. Ke, siza kubona ukuba siziqhelanisa njani ukuze uDaphne omncinci angancwabi ngenxa yeDuke yakhe kwaye ngenye indlela. Kubonakala ngathi uAnthony uzakuthatha indawo yobunkokeli kwaye uya kusonwabisa ngothando olutsha kunye namabali amatsha okanye iimfihlo.
Uphuma nini uBridgerton ixesha lesibini
Kusekutsha kakhulu ukuba ungathetha malunga nexesha lokuphuma kweBridgerton 2. Okoko ukufota kwayo kuqalile kule ntwasahlobo. Siyayazi indlela ekunzima ngayo ngamanye amaxesha ukudubula ibali lale ndlela, ye Yintoni eqinisekileyo ukuba kude kuphele lo nyaka ka-2021 okanye ekuqaleni kuka-2022, asizukuba nazo iindaba ezimnandi phakathi kwezandla zethu. Ewe kulindelwe ngolangazelelo kodwa oku kuya kusinika ixesha lokwetyisa ukuba omnye wabadlali abaphambili akasayi kuphinda abekho kwimiboniso bhanya-bhanya nakwinkululeko yayo yexesha elizayo.
Ubuso obutsha eBridgerton?
Bufana nobomi uqobo, abanye bayemka kwaye abanye bafika ngenkani. Ewe, kwiBridgertons ibingazukuhluka. Ukusukela nangona, UReéé Jean-Page akakho kubalingisi, ufika uSimon Ashley. Kubonakala ngathi olu iya kuba luthando olutsha luka-Anthony, Oko kukuthi, izibulo losapho. Ewe kunjalo, kubonakala ngathi ibali libuya lilayishe iimvakalelo ezininzi kunye nothando, kunye namandla. Kodwa kuyinyani ukuba umdlalo weqonga ukwandula ngokungafaniyo nakuqala. Umxube ongaphezulu kwesiqhushumbisi esenza ukuba sifune ngakumbi nangakumbi kwimbonakalo encinci. Kucingelwa ukuba abanye abalinganiswa, yosapho oluthandekayo, baya kuqhubeka nathi ixesha elinye. Kodwa kuyinyani ukuba ukuqiniseka ngokupheleleyo, kusafuneka silinde.
Ewe siyanyanzelisa, kodwa kukuba wayengumntu ophambili kwaye njengoko oku kungahlali kwenzeka kuthotho oluyimpumelelo, Iinethiwekhi zentlalo ziye zajika zaya kumdlali weqonga. Ke ngoko, kwi-Instagram sibonile indlela uDuke ngokwakhe athe ndlelantle kwimpumelelo yakhe enkulu ukuza kuthi ga ngoku Kubonakala ngathi utyikitye ixesha elinye kuphela kwaye ngenxa yoko, akazukuqhubeka nokuba yinxalenye, kodwa uhlala enamazwi alungileyo koogxa bakhe nangomsebenzi omkhulu owamnika ukwamkelwa kwilizwe liphela. Ngaba ungathanda ukuba ibekho kwixesha lesibini?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » IBridgertons: Ixesha lesibini ngoku liqinisekisiwe!
Uyenza njani i-Dumbbell Row ngokuchanekileyo